CHANEL Red Wallet Pane Chain WOC Double Zip Chain Mhezi Bhegi L56 - hannari-shop
CHANEL Authentic Red Wallet Pane Chain WOC Yechipiri Zip Chain Mhezi Bhegi Yakatemerwa Lambskin Leather L56
Isu tinofara kukuratidza iyi inozivikanwa Wallet Pa Chain / bhegi bhegi. Iyo inogona zvakare kushandiswa seyakajairika chikwama nekubvisa iyo inobvisa tambo. Kana sebhegi remuchinjiro-wemuviri, zvinoenderana nesaizi yako. Pakazara mu EXCELLENT pre-yemuridzi mamiriro. Ndokumbirawo usazvitase!
Kune vatengi vanokosheswa se iwe, Tinoita zvese kuedza kuchengeta mabhegi ari ayo akanakisa mamiriro anotevera:
Iwe unoziva kuti dzinenge dzehomwe dzedu dzakasakara uye dzakasvinwa. Chikopa chemamwe mabhegi zvinoita sekunge ndaneta. Tiri kuchenesa mabhegi nekushandisa zvakasarudzika, masaga eganda akazvitsaurira eEurope uye jira rakachena rakagadzirwa negwayana, kuitira kuti dehwe rehegi riitwe mukati unyanzvi uye zvakajeka. Nekudaro, bhegi iri raigona kuramba richizopenya nerutivi rwako nezvese zvinodikanwa nezviitiko. Ndokumbirawo muone kuti isu haana kugadzirisa kana kugadzirisa bhegi nekuda kweizvozvo kuisa pendi kune ganda zvinoreva kutora mweya yakakosha kune vese. Kana yangogadziriswa, bhegi rinodzinga kirimu uye rinotanga kupwanya.
Cheneswa uye chengetedza:
Une hanya nezvevamwe varidzi vane kubatwa mabhegi anoshandiswa? Ndiani aunza mabhegi kupi? Hatikwanise kubata iwo ruzivo nekuti tinotenga mabhegi kubva kumusika wemutengesi. Asi iwe haufanire kuzviita usina kugadzikana zvachose nekuda kwekutenga kubva kwatiri. Isu disinite uye deodorant Zvese bhegi nekushandisa yakakodzera uye yakachengeteka ozone jenareta kwenguva pfupi yenguva kuitira kuti iwe uite kureruka uye akasununguka paunogamuchira. Uye mushure meizvozvo, vashandi vedu vane hunyanzvi vanoongorora bhegi rakanaka kune yega yega uye kukona zvakona. Pakupedzisira mabhegi achakumirira iwe watinya "Wedzera ngoro" mushure mekutakura muunyoro / sunlight-proof yakarongedzwa bhegi yakatsaurwa stockroom.
Isu tiri vechipiri vatengesi vemaoko vane rezinesi neJapan National Public Safety Commission. Kuti udzivise hunyengeri, hurumende yeJapan inoda kuti vatengesi vese vemaoko vave nerezinesi. Isu tiri nhengo yemusika wemutengesi kupi mabhegi echokwadi chete inogona kutengeswa.
Isu takatengesa pamusoro pe1400 chaiyo CHANEL mabhegi paBay mumakore mashanu. Vazhinji vatengi vakagamuchira yakaisvonaka mashegi kubva kwatiri. Vanofara here nehombodo? Ndokumbirawo utarise kune mamwe zvaunofunga:
+ "Izvo chaizvo sekurondedzerwa kwe100% chaiyo yekunakidzwa kushanda nayo!"- Mutengi: se ******
+ "Ndiri kufara chaizvo izvozvi. Ini handitaure zvekutaura kuti ndinofara sei. Chimiro chakanaka"- Mutengi: tr ******
+ "Mutengesi akanaka kwazvo !!! Tenga kubva kwaari zvakare mune kurohwa kwemoyo!"- Mutengi: jo *******
+ "Chikuru chikwama uye chakakurumidza basa. Ndatenda."- Mutengi: sh *******
+ "Kufara uye kugutsikana chikwama changu"- Mutengi:
+ "Kukurumidza kutaurirana, bhegi rechokwadi, tsananguro chaiyo, yakarongedzwa zvakakwana."- Mutengi: la *******
+ "Kurumidza kuburitsa uye ndinoda chikwama !!"- Mutengi: co *******
+ "Ndinozvida ivo zvinoshamisa !! Inotyisa mutengesi uye chaiyo mapikicha uye tsananguro!"- Mutengi: isu
+ "Unhu hwebhegi nemasevhisi zvakanyatsonaka."- Mutengi: le *******
+ "Chaizvoizvo Akanaka !! Exquisite.Fast shipping"- Mutengi: ma *******
+ "izvo chaizvo zvandakaraira. Neruoko rwakanaka"- Mutengi: 51 *******
+ "gorgeous bag.Excellent yakatsetseka uye nyore kutapurirana. Ndatenda."- Mutengi: ma *******
Chitoro chedu chine pamusoro pe 1400 mhinduro uye vangangoda vese vatengi vakatisiira mhinduro dzakanaka. Mhinduro yedu inoratidza kuti isu takapa mabhegi emhando yepamusoro pamutengo chaiwo uye vatengi vanogutsikana nesu. Isu tinofunga chinonyanya kukosha ndechokuita vatengi vedu kufara.
Ticharongedza chinhu chacho nekuchenjera tobva taendesa kunze nekukurumidza nzira ine service tracking. Iwe haugone kumirira icho. Pakupedzisira iwe unogashira bhegi uye kurizarura zvinonakidza. Ipapo uchaona bhegi rawaida. Iwe uchapfeka bhegi pafudzi kana ruoko, uye unozvitarisa wega kubva kwakasiyana makona mune girazi hombe. Izvo zvakakosha kwatiri iko ikozvino nguva yaunenge wakaputirwa nemufaro. Ngatigadzirise chero zvikanganiso kana zvinonetsa pano usati watenga. Tichaitira isu zvakanaka. Ndapota inzwa wakasununguka kubvunza chero mibvunzo. Chikwama chako chakamirira iwe. Tiri kutarisira kutenga kwako.
Mamiriro & Matanho
Pakazara: 8 ye10
Iyo yekunze iri mune yakanakisa mamiriro ane mashoma zviratidzo zvekushandisa chete. HAPANA anoonekwa akachekwa, scuff mavara kana mahara. Iyo yemukati zvakare yakanaka uye yakachena kwazvo. Maketani ese nemidziyo inopenya uye yakanakisa. Bhegi reguruva uye bhokisi zvakare zvakanak. Zvakanyanya kukurudzirwa!
Huru: HAPANA / Perfume: HAPANA / Fodya: HAPANA
Inotongwa nevashandi vedu vaviri uye inogona kusiyana zvichienderana nemunhu wega. Ndapota ramba kutenga kana iwe uchinzwa kunhuhwirira.
Approx. saizi: H3.5 "x W7.2" x D1.1 "(H9 x W18.5 x D3 cm)
Approx. tambo kudonha: 23.6 "(60 cm)
Seri #: 22783832 (Nhamba imwechete pane sticker uye kadhi.)
Iyo mannequin mumifananidzo iri kupfeka zvipfeko muhukuru US 6. Izvo zvipfeko, mannequin, uye iPhone hazvibatanidzwe.
Chinhu ichocho chichaendeswa kubva kuJapan neinishuwarenzi yakazara uye sevhisi yekutsvaga. Iyo ichave yakaputirwa nokungwarira nehuputi hwekuputira uye bhegi repurasitiki, uye isa mubhokisi rekadhi.
PayPal chete uye inofanirwa kugadzirwa mukati me4 mazuva ekutengeswa kwekupedzisira.
Isu tiri vechipiri vatengesi vemaoko vane rezinesi neJapan National Public Safety Commission. Izvo zvinhu zvinotengwa kubva kumisika yemutengesi uko fake inorambidzwa kwazvo. Ndokumbira ubike nekuvimba.100% Ichokwadi Anovimbisa.
Mabasa ekupinza kana kubhadharisa haana kuisirwa mumutengo wechinhu kana mari yekutumira. Izvi zvinopomerwa ibasa remutengi. Ndokumbirawo ubvunze hofisi yako weCustoms yenyika yako kuti uone kuti ndedzipi mari dzekuwedzera dzichange dziri pamberi pekubhadhara / kutenga. Hatibiridzi fomu dzetsika - US neyeMutemo wehurumende yenyika dzakawanda dzinorambidza maitiro akadaro.
PEDZISIRA CHEMA ZVESE ZVINHU. WAZVIITA!